कति प्रतिफलमुलक छ ग्लोबल बैंकमा सेयर लगानी ? » Khulla Sanchar
कति प्रतिफलमुलक छ ग्लोबल बैंकमा सेयर लगानी ?
ग्लोबल आइएमई बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेर अर्ब कमाउने बैंकहरुको सूचीमा स्थापित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ९६ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले गत अर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर जारी गर्ने राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँँजी वृद्धि योजनामा उल्लेख छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने १६ देखि २० प्रतिशतसम्म बोनस सेयर जारी गर्ने पुँजी वृद्धि योजनामा देखिन्छ।
बोनस सेयरबाटै पुँजी पुग्ने भएका कारण यसले हकप्रद सेयर जारी नगर्ने भएको छ। पुँजी वृद्धिको नीतिसँगै हकप्रद सेयर र बोनस सेयर जारी गर्ने अपेक्षाका साथ अहिले सेयर लगानीकर्ता बैंकमा ओइरिएका छन्। हकप्रद सेयर जारी नगर्ने भएका कारण यसको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण खासै बढेको पाइँदैन। जसका कारण सेयर बजारमा सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न नसकेको देखिन्छ।
बैंकले भूकम्प र नाकाबन्दीको बाबजुद पनि ब्याजवापतको आम्दानीमा वृद्धि गर्न सफल भएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २८ करोड ९७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ब्याजवापत आम्दानी भएकोमा गत आर्थिक वर्ष यो रकम बढेर २ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।
नाफामा राइट ब्याकको योगदानमा वृद्धि भएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४७ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा भने २५ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै गरेको छ।
बैंकको अन्य आम्दानीमा भने वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ८१ लाख ९० हजार पुगेको छ। अन्य आम्दानीको योगदान बढ्नु त्यति राम्रो मानिँदैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पिबी रेसियो ५ भन्दा तल अर्थात ३ देखिन्छ। यो ५ प्रतिशत भन्दा तल हुँदा लगानी गर्न राम्रो मानिन्छ।
पिई रेसियो भने २२.८१ रहेको छ। पिई रेसियोको आधारमा भने लगानी जोखिमयुक्त देखिन्छ। पिई रेसियो १० सम्म आकर्षक मानिन्छ भने १० देखि १५ सम्म मध्यम, १५ देखि २० लगानीयुक्त र २० भन्दा माथि जोखिमयुक्त मानिन्छ।
निष्क्रिय कर्जामा भने कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २.२३ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात गत आर्थिक वर्षमा कमी आउँदै १.८७ प्रतिशत कायम भएको छ।
अन्तिम कारोवार मूल्य : ५१५
५२ हप्ताको उच्चतम मूल्य : ५४५
५२ हप्ताको न्यूनतम मूल्य : ४७२
विवरण २०६९/०७० २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ चौंथो त्रैमास
चुक्ता पूँजी २७८०८५८ ४१०६८५८ ६१६४२६८ ६१६४२६८
खुद मुनाफा ७२५१८० १००७४५९ ९६०९०८ १३९७८६६
कर्जा तथा सापटी २६९९१६१५ ४३००१३४८ ५०२२६६५० ६०८४१३६४
निक्षेप ३४१११४६६ ५२२९२०५८ ७४६८२९१७ ६०१७५९८४
निष्क्रीय कर्जा (प्रतिशतमा) १.६४ २.३७ २.२३ १.८७
बुक भ्यालु १३५.४५ १५३.८६ १४७.०४ १४१.३०
प्रतिसेयर आम्दानी (रुपैयाँमा) २२.८४ २४.४१ २०.०७ २२.५०
पीबी रेसियो ३ ४ ३ ३
पीई रेसियो १९.२९ २८ २३.८७ २२.८१
बजार मूल्य ४३२ ६९५ ४७९ ५१५
सेयरमा प्रतिफल (प्रतिशतमा) १६.५० १५.९३ १३.०६ १५.९२
लाभांश १५ २१ २३